Benzema Oo Taariikh Sameeyn Kara Kaddib Markuu Heshiis Cusub U Saxiixo Real Madrid – Garsoore Sports
Benzema Oo Taariikh…
Cayaaryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Faransiiska Karim Benzema ayaa dhowaan lagu wadaa inuu heshiis cusub u saxiixo Los Blancos taas oo u sahleysa inuu noqdo weeraryahanka ugu safashada badan taariikhda kooxda.
Dhowaan wuxuu noqday laacibka ajaanibta ah ee ugu safashada badan taariikhda Real Madrid. Haatan, Benzema wuxuu doonayaa inuu noqdo ‘9ka’ ugu soo muuqashada badan kooxda, rikoor uu wax yar uga harsanayahay inuu gaaro.
Benzema, waxay u tahay 12 sanno tan iyo markii uu yimid Santiago Bernabéu, sannadba sannadka ka dambeeya, wuxuu horumarinayay qaab ciyaareedkiisa caasimadda Spain.
Real Madrid ayaa lumisay hogaamiyayaasheeda qolka labiska haatan weerar yahanka Faransiiska ayaa ah hoggaanka kooxda ‘Los Blancos’. Qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee ololihii tehay wuxuu xitaa u ogolaaday in looga yeeri xulka qaranka Faransiiska.
Intii lagu jiray Euro-ga uu xulkiisa metal metalayay wuxuu dhaliyay afar gool wuxuuna ahaa ciyaaryahanka ugu fiican ‘Les Bleus’, xitaa hal talaabo ayuu ka sarreeyaa Mbappe, oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee Madrid ee suuqa kala iibsiga.
Benzema ayaa 559 kulan u saftay Los Blancos iyadoo weeraryahankii hore ee Real Madrid Santillana oo saftay 654 kulan.
Qandaraaska Benzema wuxuu dhacayaa sannad gudihiis, marka uu gaaro 33, waa inuu si tartiib tartiib ah qandaraaska ugu kordhiyaa. Sida laga soo xigtay ‘Marca’, labada dhinac ayaa diyaar u ah inuu heshiis ku eg ilaa 2023 waxaana uu fursad u helayaa inuu barbarreeyoo dhaafana rikoorkii Santillana.